Holland oo ku guuleysatay tartankii heesaha ee Eurovision oo lagu qabtay dalka Israel… – Hagaag.com
15 Seteembar 2019 in Lifestyle // Cudurka Kansarka dhiigga (Leukemia) maxaa sababa in aanan la ogaan goor hore?
15 Seteembar 2019 in National // Dr. Baadiyow oo sheegay inuu gabogabo yahay kulankii dib u heshiisiinta ee Galmudug…
15 Seteembar 2019 in World // Mareykanka oo Iran ku eedeeyey in ay ka dambeyso weerarada goobaha saliida ee Sacuudiga…
15 Seteembar 2019 in Lifestyle // Koox burcad ah ayaa ka xaday qasri caan ah oo ku yaalo dalka Ingriiska fadhi suuli oo dahab ka…
15 Seteembar 2019 in National // Qeybo ka mid ah gobolka Sh/Hoose oo ay isku fara saareen Ciidamada Somalia iyo al-Shabaab…
Holland oo ku guuleysatay tartankii heesaha ee Eurovision oo lagu qabtay dalka Israel…
Posted on 19 Maajo 2019 by Admin in fanka // 0 Comments
Duncan Laurence ayaa wadankiisa Holland u soo hoyey guusha tartanka heesaha ee Yurub Eurovision oo sanadkan lagu qabtay dalka Israel magaalada Tel Aviv, Holland ayaa ka qataneyd 44 sano in ay ku guuleysato tartankan, ugu dambeyn 26 dal ayaa isugu soo haray tartanka finalka oo xalay Sabti aheyd lagu kala baxay.
“Ma aqaan waxan iraahdo, run ahaantii ma aqaani” ayuu yiri Laurence asaga oo dareen xoog badan ka muuqda.
Heeskan ayaa markiisa horeba dadka heesaha wax ka qora ku tilmaamay in ay u arkaan inuu dadka soo jiidan doono.
Laurence oo matalayey Holland wuxuu helay 492 dhibcood, waxaana ku soo xigay Talyaaniga oo helay 465 dhibcood halka Ruushka galay kaalinta seddaxaad oo helay 369 dhibcood, Duncan oo 25 jir ah asaga ayaa qoray heestan oo magaceeda ah “Arcade” iyadoo caawinaad ka helay Wouter Hardy iyo Joel Sjoo.
Kooxdii Hollandeeska ee ka horeeyey ee ku guuleysta abaalmarintan oo la oran jiray Teach-in ayaa ku guuleystay heestooda Ding -a-dong sanadkii 1975 magaalada Stockholm dalka Sweden. Eurovision ayaa sanadka soo socda lagu qaban doonaa dalka Holland.
About Admin (7359 Articles)
Former Turkish PM breaks ties with Erdogan, ruling AK Party…
Paris court finds Saudi princess guilty in beating case…
Rafael Nadal oo si dirqi ah ugu guuleystay ciyaartii finalka Tennis-ka ee US Open…
Cudurka Kansarka dhiigga (Leukemia) maxaa sababa in aanan la ogaan goor hore?
Koox burcad ah ayaa ka xaday qasri caan ah oo ku yaalo dalka Ingriiska fadhi suuli oo dahab ka…
Nin dhagool ah oo dhib ku ah dhawaqa hadalka oo dhameeyey waxbarashadiisa jaamacadeed…